Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0213 lah
Adaladala tsy manan-tsaina
Alahady 07 Apr.
“Ary Efraima dia efa tonga tahaka ny voromailala adaladala tsy manan-tsaina; Efa miantso an'i Egypta izy ary efa mankany Asyria. Raha vao mandeha izy, dia hovelariko aminy ny fandrika haratoko, ka hampidiniko ao toy ny voro-manidina izy; Hofaizako izy araka izay efa nambara tamin'ny fiangonany” (Hôs.7:11,12). Vakio araka ny tontolon-kevitra nanoratana azy ireo andininy ireo. Inona no fampitandremana omena eto? Inona no fitsipika azontsika raisina ho an’ny tenantsika avy amin’ireo andininy ireo?
Efraima no anaran’ny zanakalahin’i Josefa faharoa izay tian’i Jakôba indrindra. Koa satria Efraima no anaran’ny foko lehibe indrindra tao amin’ny fanjakan’ny Isiraely tany avaratra, dia ny fanjakana iray manontolo mihitsy no nantsoina tamin’io anarana io, tahaka ny niantsoana ny fanjakana tany atsimo tamin’ny anarana hoe “Joda.” Ampitahaina amin’ny vorona tsy manan-tsaina (ampitahao amin’ny Jer. 5:21) ny Isiraely ao amin’ireo andininy eo ambony eo ireo, mamela ny tenany ho azon’ny fandriky ny mpihaza mora foana. Ao amin’io tontolon-kevitra io, dia maneho fikomiana amin’Andriamanitra ny fianteherany tamin’ny firenena hafa mba hamonjy azy ireo.
Inona no antony? Satria ny fikambanana amin’ilay Fanjakan-dehibe asirianina mahery na amin’ilay Egipta mpaniry laza fatratra dia hahatonga ny Isiraely hanaiky ny fahambonian’ireo andriamanitra ivavahan’ireo fanjakan-dehibe roa ireo (jereo koa ny Isa. 52:4, Fit. 5:1-6). Hidika ho fialana amin’Andriamanitra tsotra izao ny fankanesana any amin’izy ireo. Ny miverina amin’Andriamanitra, ny mibebaka, ny mankatò ny didiny ary ny manaisotra ireo andriamani-tsy izy rehetra àry izany no tokony hataon’izy ireo. Izay no hany fanantenana ho azy ireo fa tsy ny fikambanana ara-pôlitika amin’ny mpanompo sampy.
“Ny toerana nisy an’i Palestinina dia nanamora indrindra ny fanafihan’ireo fanjakan-dehibe roa tamin’ny andro fahiny ireo azy.... Ny valisoa lehibe notsiriritin’ireo fanjakana matanjaka ireo fatratra ka niadian’izy ireo dia tsy inona fa ilay lalambe nampifandray ireo faritra mahavokatra be andalovan’ny reniranon’i Neily tamin’ny ony Eofrata. Tafiditra tao anatin’io ady iraisam-pirenena io ny Isiraely sy ny Joda ka voaporitra teo anelanelan’ireo mpifandrafy anankiroa ireo. Tao anatin’ny hakiviana sy ny tsy fitokiana ara-panahy tamin’ Andriamaniny no nitodihan’ny Isiraely voalohany indrindra sady tsy tamim-piheverana tamin’ny andaniny ary avy eo tamin’ny ankilany mba hahazo fanampiana. Izany anefa dia lasa fandrika ho an’ny fiadanan’ny fireneny.”- SDABC, b. 4, t. 908.
Mora tokoa ny mila vonjy amin’olombelona mikasika ireo olana mahazo antsika toy izay ny mitady an’Andriamanitra, sa tsy izany? Mazava loatra fa afaka mampiasa olombelona Andriamanitra eo amin’ny famaliana ny vavaka ataontsika. Ahoana no ahazoantsika antoka fa tsy mamerina ny fahadisoana nataon’ny Isiraely teto isika rehefa tojo toe-javatra mahakivy ka mila vonjy? Ahoana no fomba hampiasantsika ny fanampian’ olombelona kanefa tsy voatery hiala amin’Andriamanitra?